Kusuke umsindo ngemoto kangqongqoshe - Ilanga News
Home Izindaba Kusuke umsindo ngemoto kangqongqoshe
Kusuke umsindo ngemoto kangqongqoshe
Akafuni ukusebenzisa ebihamba uzakwabo owakhishwa esikhundleni
UNGQONGQOSHE wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Kwazi Mshengu.
IGULA liphahlake nezaqheqhe ezaleni kuNgqongqoshe wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Kwazi Mshengu, osekuqubuke imvunge mayelana nemoto eyiMercedes-Benz GLE 350, okuthiwa iduve ehhovisi lomnyango wakhe, akayisebenzisi ngoba kuthiwa ayikho esimeni
Ngokuloba kwephephandaba lesiNgisi eliphuma ngeSonto, iSunday Times, selokhu uMnu Mshengu eqokwe kwesokuba ngungqongqoshe emuva kokhetho lukazwelonke olwalumhla ka-8 kuNhlaba (May) akaze ayisebenzise le moto ngoba ethi kayiphephile ukuba semgwaqweni.
Kunencwadi okukholakala ukuthi iwumgunyathi evezwe wumnyango okuthiwa ngeyakwa-Mercedes, eqinisekisa ukuthi imoto kayikho esimeni esilungele ukuba semgwaqweni.
Kubikwa ukuthi njengoba ungqongqoshe engahambi ngale moto eyayisetshenziswa nguMnu Mthandeni Dlungwane, owayengungqongqoshe walo mnyango phambilini uqashelwa izimoto ezinkampanini ezizimele ngoba ethi akaphephile kwiMercedes.
Le moto okumanje kuthiwa isapakiwe, kuvela ukuthi ibisahambe ngaphezudlwana kuka-40 000 km. NgokweSunday Times, kuthiwa lezi zimoto zikhokhelwa imali engango-R103 776.12 ngenyanga uma ziqashiwe, okusho ukuthi umnyango ususebenzise imali engaphezu kwengxenye yesigidi selokhu uMnu Mshengu wathatha izintambo.
Amaqembu aphikisayo agxeke lesi senzo, athembisa ukuphenya lolu daba. UMnu Vusi Khoza, we-Economic Freedom Fighters (EFF) KwaZulu-Natal, uthi lolu daba bazolwa nalo ngokusezingeni eliphezulu.
Uthi ngeke bavumele kuxhashazwe imali yabakhokhi bentela ngalolu hlobo. Utshele ILANGA ukuthi kubalulekile ukuba uNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMnu Sihle Zikalala, angenelele.
“Ungqongqoshe kumele ayikhokhe le mali noma esule ngokukhulu ukushesha esikhundleni ngoba sizolwa naye esishayamthetho. UDlungwane uphume isinyenyela emnyangweni esolwa ngenkohlakalo, nalona efika nje useyaganga! Sifuna uphenyo olunzulu ngale nto, sesikhathele ngogombela kwezabo.
“Umbuzo omkhulu uthi kungani le moto ingabuyiselwa egaraji iyolungiswa ngoba lo nyaka uyophela le mali exhashazwayo isilingene nemali yokuthenga imoto entsha. Sizoziphenyela nathi ngokwethu, ngeke lolu daba luphele kanjena kugangwa ngemali enkulu kangaka.
“Ukulungiswa kwale moto kungalingana nemali ekhokhwa wumnyango njalo ngenyanga kulena eqashiwe,” kusho uMnu Khoza. USotswebhu we-IFP esiShayamthetho saKwaZulu-Natal, uMnu Blessed Gwala, uthe bazomba bembule ubuqiniso bale ncwadi okuthiwa ikhishwe ngabakwa-Mercedes.
“Kayikho inkinga uma ungqongqoshe ezosebenzisa imoto eqashiwe uma athengelwe yona wuhulumeni ingekho esimeni esihle kanti nenkece ebekelwe lokho ikhona. Akukuhle kodwa uma kuzokwenziwa lokho ngoba ungqongqoshe engafuni ukusebenzisa imoto ebisetshenziswa ngomunye ngoba engamthandi, bese kwakhiwa itulo kusetshenziswe nemali engabe isiza abantu, isetshenziselwe ukufeza izidingo zabantu abathile.
“I-IFP izolandela kulaba abangabadayisi bayo imoto ukuthi ngabe iyaphila yini,” kusho yena.
Okhulumela uMnyango weze-Mfundo KwaZulu-Natal, uMnu Kwazi Mthethwa, uthe ungqongqoshe ubize umhlangano ukuthola incazelo mayelana nalolu daba.
Uthe kunohlelo okuthengwa ngalo izimoto eminyangweni kahulumeni oluze lwaphothulwa ekupheleni kukaMfumfu (October), okuchaza ukuthi umnyango ubungeke ukwazi ukuthenga imoto entsha.
“Kumele sikuqonde ukuthi ungqongqoshe akaqondene nokuqashwa kwezimoto, kodwa kunabantu emnyangweni ababhekene nalowo msebenzi,” kusho yena. UMnu Dlungwane wale waphetha ukukhuluma ngalolu daba, wathi ngeke kulunge akhulume izindaba zomnyango ekubeni engasasebenzi kuwona.
Previous articleKuhlangane imihlathi eyazanayo
Next articleUSuthu luxoshe owodumo